Ruqsadaha daganaanshaha ee kuwa la siiyay heerka Ilaalinta qofka halis ku muddan kara haddii wadankiisa lagu celiyo - Migrationsverket
Uppehållstillstånd för dig som har fått status som alternativt skyddsbehövande – somaliska
Haddii lagu siiyay heerka Ilaalinta qofka halis ku muddan kara haddii wadankiisa lagu celiyo waxaad heleysaa 13-bilood ee ruqsada daganaanshaha. Haddii aad weli qabtid sababaha loogu baahanyahay illaalada markii ay kaa dhacday oggolaanshahu, laga yaabo in la kordhiyo.
Oggolaanshahaaga ku meelgaarka ah waxay ku siisaa xaquuqda lagu noolaado oo loogu shaqeeyo Sweden ilaa 13 bilood. Inta lagu jiro muddadaas waxaad leedahay isla xaquuqda ee daryeelka caafimaadka sida qofka haysto ogggolaanshaha daganaanshaha joogtada.
Sida casdeynta oggolaanshahaaga daganaanshaha waxaad heleysaa kaarka oggolaanshaha deganaanshaha. Kaarkan ma ahan waraaq aqoonsi ama waraaqda safarka. Waxaad ugu safri kartaa gelitaan iyo ka soo baxid wadanka haddiiba oggolaanshahu ay shaqeyneyso, laakiin haddii aad u safartid meel ka baxsan Sweden waa in leedahay baasaboor shaqeynaya iyo kaarkaaga oggolaanshaha daganaanshaha si markaas ay kuugu suurtogasho in aad dib usuu gasho wadanka.
Akhri wax badan oo ku saabsan kaararka oggolaanshaha
Ka diiwaangelinta diiwaanka buls­hada
Marka aad heshid oggolaanshaha deganaanshaha kumeelgaarka waa in aad iska diiwaangelisaa diiwaanka bulshadda ee Wakaalada Canshuurta Swedish (Skatteverket) sida ugu dhaqsida badan oo suurtogalka ah. Diiwaangelinta ayaa loo baahanyahay ka hor inta aadan xaadirin fasalada Swedish ee Socdaalada (sfi) iyo xaq u lahaatid faa'idooyinka nidaamka amniga bulshada Swedish. Markii aad iska diiwaangeliso diiwaanka bulshadda waxaad sidoo kale heli kartaa waraaqda aqoonsiga Swedish, taas oo muhiim kuu ah si aad, tusaale ahaan, akoon bangi u furatid.
Si aad isaga diiwaangelisid diiwaanka bulshada waa in aad aadaa Wakaalada Canshuurta Swedish taas oo qoreyso halka aad ku nooshahay, heerkaaga guurka (haddii aad guursatay ama aadan guursan), muwaadinnimadaada iyo goobta dhalashada. Marka aad aadid Wakaalada Canshuurta waxaad u baahantahay in aad keentid kaarkaaga oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah iyo aqoonsiga oo shaqeynaya. Haddii warqadaada ay hayso Wakaalada Socdaalka Sweden waxaa dalban kartaa koobi iyada ah . Koobiga waa in uu saxiixaa qofka caddeynaya in uu yahay koobi run ah ee ka asalka ah. Qofkaan waa in sidoo kale qoraa magacooda oo xaraf weyn iyo sheegaa lambarka taleefonkooda.
Macluumaadka Wakaalada Canshuurta Swedish ee diiwaangelinta bulshada (oo af ingiriis) External link, opens in new window.
Dadaal ku bixinta dib u dejinta (etable­rings­in­satser)
Qofka helay dhawaan sharciga deggenaanshaha wadanka Iswiidhan ee xaqa u leh inuu halkan ka shaqeeyo wuxuu xaq u leeyahay inuu helo dadaal dib u dejin ah si uu shaqo u helo. Dadaalka lagu bixinayo si dib laguugu dejiyo waa aktiifiteetyo adiga ku caawinaya oo ay ka mid yihiin inaad barato luqadda iswiidhishka, oo aad timaado suuqa shaqada si aad shaqo u hesho kadibna aad masruufkaaga ula soo bixikartid. Xafiiska shaqada ayaa ka mas’uula dadaalka lagu bixinayo sidii aad dib ugu degi lahayd oo aad u noqon lahayd qof shaqa ka raadinaya wadanka Iswiidhan. Bogga internetka ee xafiiska shaqada ayaad ka heleysaa warbixin intaa dheer. Warbxintu waxay ku kala qoran tahay luqado badan.
Macaluumaad ku saabsan kaalmada dib u dejinta waxa laga heleyaa bogga internetka ee Xafiiska shaqada External link, opens in new window.
Xafiiska shaqada ayaa adiga kaa caawinaya in aad shaqo hesho ilaa intaa buuxinayso 65 sano, taas oo ah da’da ugu caansan ee hawlgab lagu noqdo wadanka Iswiidhan. Dadka wadanka Iswiidhan yimaada wakhti dambe iyagoo da’ weyn kuwaas oo hela lacag yar oo hawlgab ah ama aan waxba helin. Haddii aanad lahayn lacag hawlgab ah oo aad u noolaato waxaad la xiriiraysaa Hey’adda hawlgabka waxaanad ka codsanaysaa kaalmada dhaqaale ee la siiyo dadka waaweyn.
Ka akhriso macluumaad ku saabsan kaalmada dhaqaale ee dadka waaweyn ee ay bixiso Hey’adda hawlgabku (luqadda iswiidhishka) External link, opens in new window.
Ka shaqeynta Sweden
Haddii aad adigu haysato sharciga deggenaanshaha ku meelgaarka ah kaas oo ah 13 bilood waad ka shaqaynkartaa wadanka Iswiidhan.Haddii aad haysato shaqo aad isku masruufikartid inta aanu kaa dhicin sharciga ku meelgaarka ahi waxaad haysataa fursad aad ku codsankartid sharciga deggenaanshaha joogta ah.
Markii aad codsatid shaqo waa in aad la timaadaa koobiyada waraaqaha ee muujiya in aad leedahay xaquuqda loogu noolaanayo oo lagagashaqeynayo Sweden. Sidoo kale la imow kaarkaaga oggolaanshaha daganaanshaha. Loo shaqeeyahu wuxuu rabayaa in uu ogaado inta laguu ogolyahay in aad ka shaqeysid Sweden iyo haddii ogolaanshahaaga aad uga shaqeyneysid Sweden lagu sababayo wax xadeyno ah. Loo shaqeeyahaaga wuxuu rabayaa koobiyada waraaqahaaga iyo wuxuu sidoo kale ogeysiinayaa Wakaalada Canshuurta Swedish in lagu shaqaaleysiiyay.
Qoys dib u mideynta
Haddii aad haysato sharciga deggenaanshaha oo lagugu siiyey inay jirto baahi kale oo magangelyo (alternativt skyddsbehövande) isla markaana lagugu qiimeeyey inaad leedahay rajooyin aasaas fiican u leh in lagu siiyo sharciga dennenaanshaha wakhti dheer markaa qoyskaagu waxay codsan karaan sharciga deggenaanshaha si ay adiga kuugu soo guuraan.
Qoyskaaga dhow oo kaliya ayaa codsan kara sharci deggenaanshaha si ay adiga kuugu yimaadaan wadanka Iswiidhan. Qoyskaagu waxa ay heli karaan sharciga dewggenaanshaha ilaa inta ogolaanshahaagu shaqaynayo..
Haddii aad xaq u yeelato in laysu kiin keeno qoyskaaga, waxa lagugu xisaabinayaa inay ku qabanayso shuruuda masruufku. Taas macneheedu waxa weeye waa in aad masruufi karto naftaada iyo qoyskaagaba. Waa inaad sidoo kale haysato guri idinku filan oo aad ku wada noolaan kartaan markay qoyskaagu kuugu yimaadaan Iswiidhan. Waxaa jira waxyaabo ka reeban shuruudaha masruufka, tusaale ahaan haddii qoyskaagu codsado sharciga deggenaanshaha saddex bilood gudahood laga bilaabo maalinta aad heshay sharcigaaga deggenaanshaha.
Inta ka akhriso warbixin kale oo quseyso qoys dib u mideynta iyo shuruuda is masruufida
Oggo­laans­haha daga­naans­haha waalaga laaban karaa
Oggolaanshaha deganaanshahaaga waa laga laaban karaa haddii aad sheegtid macluumaad been ah marka aad codsaneysid Oggolaanshaha daganaanshaha, ama haddii adigoo og been sheegtay ama aad ku guuldareysatay in aad sheegtid wax aad ugu muhiimsanaa ruqsada daganaanshahaaga.
Haddii laguugu xukumo dambi, maxkamada waxay go'aansan kartaa in lagu celiyo. Wakaalada Socdaalka ayaa kadib ka laaban karta oggolaanshaha daganaanshaha. Oggolaanshahaa daganaanshaha waa laga laaban karaa xitaa haddii aad laheyd oggolaanshe dhoor sanno.
Kord­hinta Oggo­laans­haha daga­naans­haha kume­el­gaarka ah
Markuu shacigaaga deggenaanshaha ee ku meel gaarka ahi uu dhaco, waxaad fursad u haysataa inaad codsato wakhti kordhin. Waxaad heli kartaa in sharciga deggenaanshaha laguu dheereeyo haddii aad weli u baahan tahay ilaalin/badbaado. Saddex sano ka dib, waxaad sidoo kale codsan kartaa sharciga deggenaanshada ee joogtada ah.
Ka akhriso warbixin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo dheeraysto sharciga deggenaanshaha (oo af ingiriis)
Ka akhriso warbixin intaa dheer oo ku saabsan waxa loo baahan yahay si qofka loo siiyo sharciga deggenaanshaha joogtada ah (oo af ingiriis)
Rafcaan ayaad ka qaadan kartaa go'aanka ku saabsan in sharciga lagugu siiyey inay jirto baahi kale oo magangelyo (alternativt skyddsbehövande) haddii aad aaminsan tahay in lagu siiyo sharci qaxootinimo.
Akhri waxbadan oo ku saabsan sida looga racfaan qaato go'aanka
Warbixin ku socota qofka dhowaan u soo guuray wadanka Iswi­idhan ee haysta shar­ciga degga­naans­haha
Ha ilaawin in aad xafidato go’aankii lagaa gaadhay markii sharciga degganaanshaha lagu siiyey. Waxaad u baahan tahay markaad la xidhiidhays hey’addaha iyo ururada kala duwan.
Si aad isu diiwaangeliso oo aad u hesho tobanka lambar ee iswiidhishka (personnummer) waxaad u tegeysaa Hey’adda cashuurasha (Skatteverket). External link, opens in new window.
Si aad ugu qornaato nidaamka ammaanka ee arrimaha bulshada waxaad u tegeysaa Xafiiska caymiska bulshada (Försäkringskassan). External link, opens in new window.
Degmooyinka wadanka qaarkood waxay leeyihiin xafiisyo u qaabilsan xidhiidhka guryaha halkaas aad adigu markaa ka codsankartaa guri. Waxay xitaa adiga degmadu ku siinkartaa tallooyin ku saabsan dadka baraayfadka ah ee guryaha kireeya.
Degmada aad deggan tahay ayaa adiga kuu soo bandhigaysa sidii aad carruurta ugu helilahayd dugsiga xannaanada carruurta iyo iskuulkaba.
Su’aalaha ku saabsan daryeelka caafimaadka waxaad la xidhiidhaysaa gobolka aad deggen tahay. Daryeelka caafimaadka wadanka oo dhan waxaad ka heleysaa 1177 Hagaha daryeelka caafimaadka. External link, opens in new window.
Su’aalaha khuseeya barashada luqadda iswiidhishka ee dadka ajaanibka (SFI) waxaad kala xidhiidhaysaa degmada aad deggan tahay. Ka eeg xitaa bogga internetka ee Degmooyinka wadanka Iswiidhan iyo maamulada gobolada caafimaadada (Sveriges kommuner och regioner). External link, opens in new window.
Haddii aad shaqo raadsanayso waxaad iska diiwaangelinaysaa Xafiiska shaqada (Arbetsförmedlingen). External link, opens in new window.
Hey’adda hawlgabka External link, opens in new window. waxay haysaa warbixin luqadda iswiidhishka ku qoran oo ku saabsan dadka wadanka Iswiidhan yimaada wakhti dambe iyagoo da’ weyn kuwaas oo hela lacag yar oo hawlgab ah ama aan waxba helin.
Warbixinaha ku saabsan waxbarashooyinka ilaa heer sare ama heer jaamacadeed waxaad ka heleysaa Antagning.se External link, opens in new window. ama studera.nu. External link, opens in new window.
Su’aalaha khuseeya lacagta la siiyo qofka waxbaranaya waxaad kala xidhiidhaysaa Rugta kaalmada waxbarashada (CSN, Centrala studiestödsnämnden). External link, opens in new window.
Su’aalaha khuseeya liisanka baabuurka waxaad kala xidhiidhaysaa Wakaalada gaadiidka (Transportstyrelsen). External link, opens in new window.
Su’aalaha khuseeya xaq u lahaanshaha codaynta waxaad la xidhiidhaysaa Hey’adda doorashooyinka (Valmyndigheten). External link, opens in new window.
Warbixin ku saabsan dugsiyada/iskuulada wadanka iswiidhan waxaad ka heleysaa Wasaaradda waxbarashada Arrimha iskuulada iswiidhan. External link, opens in new window.
Wabixino ku saabsan bulshada wadanka Iswiidhan oo luqado kala duwan ku kala qoran waxa laga heleyaa Macluumaad wadanka Iswiidhan ku saabsan (Information om Sverige). External link, opens in new window.
Warbixino intaa dheer oo bulshada Iswiidhan ku saabsan waxa laga heleyaa Bpgga internetka machadka iswiidhishka. External link, opens in new window.
Iswiidhan way salaaman tahay! (Hej hej Sverige!) External link, opens in new window. waxa filin gaaba oo kugu dhiirigelinya sida uu wadanka Iswiidhan u shaqeeyo.
Bogga baro luqadda iswiidhishka www.informationsverige.se External link, opens in new window. waxaad ka heleysaa leenkyo kala duwan oo ku geynaynaa borogaraamo badan sidii aad adigu keligaa isu bari lahayd luqadda iswiidhishka.
Adeegyada khuseeya macluumaadyada Hey’adda macaamiisha (Konsumentverkets upplysningstjänst) External link, opens in new window. waxaad ka heleysaa tallooyin ku saabsan su’aalaha marka aad wax soo iibsato ama aad heshiisyo saxiixdo.